Grid Ngano Ongororo: Yakasimba arcade racer, yakakura AI - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 27, 2022 | nhau, Miedzo yemitambo, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 75%Chikamu 75%
NeGrid Legends, Codemasters yakaisa pamwe yakakura pasuru yemutambo wemujaho wakaburitswa neElectronic Arts. Zvakawanda zvemukati hazvireve kunakidzwa kwakawanda, asi mujaho weArcade anoita basa rakanaka.
Kana Codemasters vakaisa maoko avo pamutambo wemujaho, unogona kutarisira mhando. Grid Legends inopa izvo zvakare, asi mujaho weArcade haape iyo hombe show iyo vateveri vaitarisira. Chokwadi, nemhando yenyaya, anopfuura zana nemakumi matatu emujaho uye sarudzo hombe yemotokari dzemujaho kubva kumarori kuenda kune e-mota, vanogadzira vane zvakawanda zvekupa.
Nyaya Mode: Gri(n)d Ngano
Sezvineiwo iyo yakakura twist paGrid Legends ndiyo nyowani nyaya modhi, iyo Codemasters akaisa simba rakawanda mairi. Panzvimbo pekuvimba neaya ane mavara mavara, vaida kupa vanopikisa mujaho zviso chaizvo, nevatambi - izvo zvainyanya kubudirira, asi nguva nenguva unofanirwa kunyemwerera nekuda kwezviitiko zvisinganzwisisike.
Chero zvazvingava, Nathan McKane anonyanya kunzwisiswa sembongoro yaanofanirwa kunge ari nyaya-akachenjera, chinhu chinokurudzira chisingafanirwe kurerutswa, nekuti mumijaho unopa zvese kusundira mukomana kubva munzira. Iyo yakakura sensation - tekinoroji à la Iyo Mandalorian yakashandiswa - haigone kuoneka nemeso. Icho chokwadi ndechekuti: mushandirapamwe unovaraidza, kunyangwe iyo modhi inonzwa senge kugaya munzvimbo, nekuti iwe unofanirwa kuita izvo zvinodiwa kuti uvhure chikamu chinotevera. Zvinotora anenge maawa masere, ipapo nyaya yapera. Chiyero chekuomerwa chinosiyana kubva kure nyore kusvika kune chakaoma, zvinotonyanya kunetsa dzimwe nguva semunyaya modhi.
Iyo cockpit yekuona inosanganisirwawo muGrid Legends. Kunobva: gamepoint
Mukupesana, chii chakanyanya kutyisa nezveGrid Legends ihwo hungwaru hwekugadzira. Mudzvanyiriri AI akanaka zvekuti anotonzwa sekunge uri kumhanyisana nevatambi vevanhu panzvimbo yepamusoro. Iyo AI inokanganisa, inosundira kure, inopera muchikwata. Izvo zvese zvinotaridzika kunge zvechokwadi uye zvinogadzira mhepo yakanaka panguva yemujaho waunopotsa mune mimwe mitambo yemujaho.
Kukuvadzwa kwependi kunogumbura vakwikwidzi
Codemasters inobvisa nekutsamwisa rubber banding, panzvimbo pekushandisa zvakare kuNemesis system, iyo vateveri veiyo franchise vanotoziva kubva kune yakafanotangira. Saka vanopikisa "rangarira" maitiro aunoita kwavari panjanji - uye dzimwe nguva unotsamwiswa zvakanyanya nevatyairi vakambokutsamwisa zvakanyanya. Izvi zvinowanzogara kune akati wandei, vakwikwidzi vanotyaira zvinooneka zvakanyanya. Sezvineiwo, mubvunzo wemhosva hausimuke muGrid Legends: ani naani anopinda mupende yevatyairi vanopikisa, chero chikonzero, anogona kushandura vatyairi kuita muvengi, kunyangwe kana izvi zvikaitika nekusaziva. Chirema? Kana bodo. Sei vatyairi veAI vachifanira kunge vasina "kutsamwa", mushure mezvose, vari kukanganisa nhangemutange yakanaka.
Kukura kwemutambo nderimwe simba: Mhando dzakasiyana, sarudzo dzevazhinji, mupepeti wenzira uye zvimwe zvemukati maficha akasanganiswa nekunzwa kwakanaka kwekumhanya kunovimbisa maawa mazhinji ekunakidzwa. Mota dzinogona kufambiswa zvakachena pamusoro pemakwara, kunyangwe ukadhumhana neguardrail zvishoma kazhinji nerubatsiro rwekugadzikana rwakadzimwa - inogona kudzoserwa. Chero zvazvingava, Grid Legends inopenya kana ichipenya, kunyanya panjanji: makosi akagadzirwa zvakanaka uye mhando dzemota dzemujaho dzakanaka - asi graphical opulence yeForza Horizon 5 haisviki kumutambo weCodemaster. Kumashure, maoptics anowira kuseri kwechivharo chekuputsika. Vataridzi (kazhinji) vakashata uye mamwe ese ematepi akasimba zvakanyanya. Zviregerere, nekuti rombo rakanaka zvinongokosha panguva yenhangemutange kana ukanyatsozvitarisa.
Grid Legends inopenya painoda kupenya semutambo wemujaho: panjanji. Kunobva: gamepoint
Uye iyo yekukuvadza modhi haisipo. Ichokwadi kuti imwe pendi inoputika pano neapo panguva yekudhumhana uye zvikamu zvega zvinobhururuka zvakapoteredza, kana kuti unorasikirwa nevhiri kana mhepo inopera zvishoma nezvishoma, asi kazhinji hapana chinoputika. Izvi zvinoita sezvisinganzwisisike, kunyanya mushure mekudhumhana kukuru muchikwata. Codemasters vangangove vasina kushinga zvakakwana pano, nekuti tsaona ine chisimba inofanirwa kuve nemhedzisiro yakakomba, asi izvo zvinoitika kashoma. Pachiri kudiwa restarts nguva nenguva.
Izwi, kune rumwe rutivi, riri padanho repamusoro: injini dzinodzvova, kurira uye kurira - izvi zvinotsigira kunzwa kwakanaka pavhiri. Mutsindo wemutambo uyu hauna kunaka: uri kuwedzerawo, asi zvakanyanya mumusoro mako. Kana iyo nhamba yematiraki kana kusarudzwa kunonyatso kugutsa.
Nhamba yevatambi: single player/multiplayer)
Zera: kubva ku0 makore (USK)
Kukurudzira kwenguva refu: pakati
Genre: Mujaho mutambo
Sub Genre: Arcade Racing Game
Muparidzi: Electronic Arts
Official Webhusaiti: batanidzo
Gore rekuburitswa: 2022
Mapuratifomu (Test system): PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S
Mutengo: kubva ku59.99 euros
Grid Legends yakatarisana nemakwikwi akaomarara sezvo Gran Turismo 7 inotaridza kuburitswa kwemhando yengano. Uku ndiko kuzvisarudzira kwega: Mukuenzanisa zvakananga, Codemasters vangangorasikirwa. Asi kusvika panguva iyoyo, mafani anogona kunakidzwa neakawanda mafaro emakumbo paGrid Legends tracks.
Grid Legends ndiyo yakajairwa mijaho yemitambo yakawanda inoda kukwezva mapoka akawanda anotarirwa sezvinobvira. Izvo zvakanaka, asi zvakare zvakaipa - zvinhu zvakawanda zvinoshanda nemazvo, asi zvishoma zvakanaka. Vajaho verudzi vanozvipira kune imwe uye kwete ese misoro kubva munyika yemujaho kazhinji vari nani mune dzimwe nzvimbo. Zvakangodaro: Grid Legends ndeye yakabatana yakazara package umo iwe haupotse chero chinhu mukupedzisira. Chiito chiri panjanji chikuru, mijaho inonakidza. Kunyange nhau yacho inopwisa, pasinei zvapo noutera huduku. Iwe pamwe waisazotenga Grid Legends nekuda kweiyo modhi yemushandirapamwe, asi kuyedza pakupedzisira hakupe zvakakwana kune izvo. Sebhonasi kune imwe nzira yakawedzera mujaho mutambo, unofara kutora nyaya newe.
Iko Grid Legends inogona kunyatsogutsikana iri munzira dzenyika ino: Kunakidzwa kunotanga nechiratidzo chekutanga. Mijaho ine simba, zvakare nekuda kwehungwaru hwekugadzira uye iyo Nemesis pfungwa. Iyo yekutyaira ruzivo inokodzera, iwo mameseji anogona kugadziridzwa kana achidikanwa uye achiburitsa echokwadi chiitiko chemujaho, kunyangwe kumwe kunzwisiswa. Kana iwe uchifanira kubhuroka nguva yekumirira kana uchitsvaga dzimwe nzira dzemamwe ma-no-frills emujaho mitambo, iwe unowana inogutsa sarudzo muGrid Legends.
GRID Ngano: Default | Xbox One/Series X|S - Dhaunirodha Code * Parizvino hapana ongororo 69,99 EUR tenga
mhedziso Grid Legends mutambo wakanaka wemujaho une AI huru. Mumwe anotarisa pasina kune hukuru hutsva, asi iyo Nemesis zano inyowani inonakidza inoita kuti mujaho kunyangwe uchipesana nehungwaru hwekugadzira uratidzike zvinoshamisa "munhu".
Nyaya / mamiriro
Mharidzo / tekinoroji
Gameplay / zvinodzora
Kare Nhau dzebhodhi mutambo: Spring nhau kubva Spielworxx
Inotevera Tiny Tina's Wonderlands: mutambo wemitambo uye hunyanzvi miti mune turera
Doodle Dungeon uye Munchkin kuwedzera: zvitsva kubva kuPegasus Spiele
Iwo akanakisa slot michina yechirimo 2020
Yakanaka intergalactic mamiriro paFedCon 28
Haba's "Mupata weVikings" ndiyo "Mutambo Wevana weGore 2019"